Why businesses use market research and how market research contributes businesses? – Market Research Association
Posted on October 15, 2018 November 15, 2018 by mra
Why businesses use market research and how market research contributes businesses?
1. Daw Pwint Oo Swe, Marketing and Communication Director, Ooredoo Myanmar
2. Daw Lyn Lyn Tin Htun, Managing Director, Mango Marketing Service
3. Ms. Marita Schimpl, Managing Director, Myanmar Survey Research (MSR)
4. Dr. Aung Thura, Chief Executive Officer, Thura Swiss
During the discussion, two of the panelists, i.e., Daw Pwint Oo Swe from Ooredoo and Daw Lyn Lyn Tin Htun from Mango Marketing discussed from the point of view of customer of market research services, while the other panelists, i.e., Ms. Marita Schimpl from MSR and Dr. Aung Thura from Thura Swiss gave their views as market research service providers.
The first part of panel discussion started with the question about what are working and what needs improvement in dealing with market research providers. Starting with the customer side, MD of Mango gaveabrief talk on their work history with research agencies. She explained their work with research agencies as bothaclient andapartner. She thought research cost is expensive, but it could be regarded asagood investment. Regarding what are the areas that need improvement, she mentioned about the time taken for data and information. She stressed that data and information need to be reliable and at the same time, be provided quickly.
Continued by M&C Director of Ooredoo, she mentioned their company invests in research activities every year in order to track year-on-year change, for example, market share, competitor movement, and brand health. At the moment, the company is receiving quarterly report, and based on that, sets up an action plan for next quarter. In her opinion, day-to-day interaction is very important, so she is actively engaging with the research agency. She stressed that they need to be aware of the changes and their impact.
>> Moderator – “What are the things that went wrong?”
MD of MSR expressed that it is important to actively challenge and discuss what the results would look like. She said throughout the time, the research agency should discuss with the client and be upfront about what was going on during the data collection process. Market research agency should be an active partner and challenger, and bring the consumer in the loop, which can be challenging to do sometimes. She said she had experience with many clients who were thinking about their brands, and actually were not surrounded by consumers. It seems they areabit isolated in their ideas. That is where the market research agency comes in, and gives the fresh view of consumers.
CEO of Thura Swiss started by saying that different clients behave differently. Some clients know exactly what they want, and they haveaclear view of what the result would look like. On the other hand, some clients have only vague ideas. They know what market they want to enter, and what they want to be selling. But apart from that, they areabit lost. This is when market research agency comes in and guides them. He explained that there can bealot of misunderstandings and many rounds. Another problem also lies with many client companies, which only see market research services asanecessary step to take because they need information, but are focused much more on other things. Often, clients came to the company withavery vague idea and requested to writeaproposal. They do not sometimes realize how much work has to be put into this, and say it was not exactly what they want only after reviewing the proposal. So, he said that clients are supposed to give which direction they would like to take, and from that, the research agency can guide them. He expressed that it is also about mutually respecting each other, and have understanding on what to expect from both sides. While not everything can be possible, clients and the research agency should be collaborative and working together.
MD of MSR thinks market research is not supposed to be just providing statistics. Instead, market research agencies should help the clients to unlock the opportunities. By drawing from insights, research agencies should provide advices on what that data or information means for the company, and what the company can do differently. She believes this is the point where the research providers can add value. She said it is important to consider the value chain as well and how they can add value to the whole industry. For her, following the clients, and helping the clients to become more successful are among the big things they always should be doing. Given that, she said people would see their product – market research service – is not expensive anymore.
MD of Mango expressed her concern over the reliability of the information by stating the question, “How do we know what you recommend is right?”
It is true she could refer to the experience years and performance review.
MD of MSR answered that there are so many things that need to be considered, and of course, there is always uncertainty. She said they couldn’t pinpoint the exact outcome. However, based on their experiences and knowledge about the consumers, they can reduce the likelihood of failure and mistakes. What is more? Together with clients, they can come up with new perspectives for new businesses.
M&C Director of Ooredoo added about the accuracy and relevancy of the data. She said there could be some cases in that the data could no longer be helpful when they reach to them.
MD of MSR said that in many regions of Myanmar, digital literacy is not as developed. She agreed with M&C Director Ooredoo by stating that they need to consider how they can be more agile, and how they can speed up the market research process.
>> Moderator – Myanmar has the highest penetration of mobile phone usage. Researchers use survey monkey or other online survey platforms to reach consumers. Is it innovation or is it something the MRA or ESOMER could work on?
MD of MSR said even when the research agency wants to push, if the consumer is not ready, then it would not beagood idea to sell this to the client. Clients spent quiteasum of money, and they expect the research agencies come back with reliable results, which really make sense. She thinks it isabit tricky at the moment. If they want the inclusive result, or focus on female living in rural areas, she would not employ any digital technology for them to ask questions. This is because the agency will not know if the consumers really understand the meaning of the question. She had previous experience of workingalong time in telecommunication companies. Usually, those telecommunication companies send text to clients regarding new promotion. It is one to think how many people will actually click these text messages and read them. People are usually fed up and are not likely to click. Even if they click, when they are directed to another website, they just left it. She thinks many should work together to improve the digital literacy in Myanmar. Only when it is sure that the public has certain level of knowledge, she said the agencies should be confident about using these methodologies.
CEO of Thura Swiss said data acquisition would becomeaprocess that is more automatic. But in the long term, it cannot be justified and it will be more difficult. Data acquisition in the form of automatic observation and data acquisition through transactions will be expected. On the other hand, how to interpret what those data mean will be another area. Research agencies will have to put more works into data interpretation. In other words, it means putting meanings to the data. Regarding how research agencies will change in the future, nowadays, they have lifecycle – do research first, interpret it, the customer understands it, they take actions. That isalong lifecycle as the loop closes only after six months, one year, or two years. He thinks this is changing. Now, it is more about acquiring information on an individual level (one-person level), and directly shaping products or services out of the information they get. That means it isavery short customized service or product. He thinks that is something where traditional market research companies will have to expect and look into. This will happen and it is not about doing survey, analysis and then writingareport. It is about what they do with information they get from an individual. That isamuch shorter cycle.
MD of MSR added about the duration it should take in terms of online survey. Ideally, it should be no longer than 10 to 15 minutes, and that should be maximum. Of course, she is aware that there are some surveys, which should take longer, for example, 30 minutes. However, she believes that in this case, many supports are required from clients’ side if they want to do it well.
>> Moderator – Inviting questions from audience
The second part of the panel discussion observes opinions sharing based on the questions asked.
Q1 by U Moe Kyaw, Chairman of MRA asked about data collection. “Facebook and google don’t do research. They have all the data. Why it is that Facebook and Google do not do any research? Do you think they have everything they need? What is your view on this?”
M&C Director of Ooredoo said Facebook share the data with them, but not the ones that are specific to other competitors. They shared their share of voice in terms of impression this month compared with the last month. They shared the closest percentage they are having. However, they cannot know with which competitors they are going against. She said comparing with their spending, they would giveaguess in that which agency closely followed them or was ahead of them. This is the best they can do lately. In the past, Facebook and Google had not shared any data even about themselves. Recently, Facebook has improved their customer service to their big clients. With that, Ooredoo can ask questions. As for quarterly data, Facebook comes to them to share the data. It works similar with Google. The other data targets consumer.
MD of MSR said she thinks Facebook does research. She believes they have to innovate and look into new technologies definitely. However, they as researchers should not just protect what they did in the past, but embrace all the new changes, position themselves as insight consultants. In other words, consulting people inaway their clients truly understand consumers.CEO of Thura Swiss added that not only for small and local companies, but for big players, data protection is important.
MD of MSR agreed and added that they always need to consider the privacy of consumers.
MD of Mango expressed her concerns over the privacy. She thinks these social media companies have been watching them, and obtaining data about them. She said many have become reluctant to enter those social apps asking questions and drawing results for fun.
Q2 by U Moe Kyaw, Chairman of MRA – “Facebook basically has data, for example, who saw your ad, clicked your ad, who did buy and who did not buy your product. It is easy to provide when 70% of 80% of your customers are using the platform. And they give you all the data we don’t. So have you ever come to the point where you have to think to whom you should listen to, us – market research agencies – or them?”
M&C Director of Ooredoo said she listened to both. To give as an example, in order to assess how effective her TV commercial launch was, from Facebook, she could compare the success with the previous campaign. On the other hand, from the traditional market research agency, it is going to dive deep – what was liked and disliked and what kind of further improvement the company could take in the future. Meanwhile, Facebook is not going to give that. It is true they usealot of data from Facebook.
>> Moderator – Inviting more questions
Q3 by Kantar TNS – “When we talk about the big data and AI (Artificial Intelligence), people are giving you information without their consent. And from traditional point of view, if it is without consent, it doesn’t mean research. So how can we control this kind of big data without consent and research data with consent? And I think Esomar already has some measures and policies around this. So the question can be how we should prepare for this researched data and non-researched data although they can be insight for us.”
MD of MSR said unfortunately when we use Facebook or any other apps, something will be measured and we will have given our consent. That is why it is the job of this body to define and safeguard those standards. She said users should be careful about what the results mean and what the source is. The followers on Facebook or Weibo can be different from those who watch TV ads. So she believes they can’t be put into one place as they are like apples and pears. She stressed that market research agencies should be awake and alert their clients not to put many things into one basket. In addition, all of them should educate and keep it to their standards by not just passively tracking things. There are many companies, which do passive tracking, and it should be all done with the consent of consumers ifaresearch company does it. She firmly believes research companies should be looking where the data is coming from, what the source is and what the methodologies are, and use all these to assess the validity and reliability of the data.
CEO of Thura Swiss mentioned that the template people normally skipped to read the moment they signed up on Facebook or Google tells about the consent thing. He thinks finally, it is customers who decide which brings value to them. Product creation, service creation, etc. Maybe the customer does not need to have data that reflect the whole population. Maybe they want to know what that specific group wants. Maybe that’s just enough to observe what they are doing. It is important for customers to understand what the data means, and what they do not mean. That is wherearesearch agency can add value, help interpret the data, and explain. He thinks research agencies need to adjust according to circumstances.
MD of Mango said these days, they, as an advertising agency, are being challenged by how they can createamemorable and effective commercial using digital platform such as Facebook. Previously, they took three to four months to doaTV commercial. These days, they have to createavery quick commercial to show it on digital platforms. The challenge is what value they add, and how to createalasting experience. She stressed that they need to createacommercial that can be expensive, but must be effective.
Q4 – If there isayouth growth in 10 years, how research companies are going to prepare for the future? Howastartup research agency can tackle the challenges?
Q5 by Kantar TNS – For us to be able to achieve that growth we talk about that had happened in Vietnam or Thailand, it is going to have to come from local Myanmar businesses, developing products. There might beafundamental challenge in how to educate local Myanmar businesses in terms of understanding the value of research.
Mr. John Smurthwaite, ESOMAR Asia, and Pacific Ambassador answered that in Vietnam 80% or 90% of businesses (research users) in 2000 was international firms. Now at least 40% of 50% are local firms and spending money on research. So it is true that the money has come from that market.
M&C Director of Ooredoo said they should engage with the research agencies actively and constantly.
MD of Mango saidalot of local businesses are interested in making things properly. They have started contacting advertising agencies to createaproper advertisement. But if clients come to the advertising agencies without data, she said the first thing the agency suggested the client was to purchase the data. As the industry grows, clients have become aware of the importance and do spend on this. As her final point, she insisted research agencies to get in touch with local clients and offer qualitative and quantitative research services to them. Finally, she believed the forming of MRA isavery big step, and hoped to see standardization.
MD of MSR also hoped to see research agencies increasingly work with local clients in the future, and be able to convince them to purchase research services. CEO of Thura Swiss concluded by saying that he is pretty sure there will be more local companies advertising in the future. Five or six years ago, small companies like his would not have had potential to advertise. Now he can just put an advertisement on Facebook. They haveareach of 20,000 customers. Making an ad is not expensive and so it is perfectly possible to advertise. However, if he is questioned if they are ready for the new challenges, he would say “no” at the moment. He recognizedadifferent revolution that took place. He said they had no mobile phone penetrationacouple of years ago. He said they could now reach to many people inacheaper way. They also know what they need to know, and he expressed that they all should be having start-up mindset and open to new challenges.
Everyone agreed for market research and advertising industry, now is an interesting time.
“ဘာကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဈေးကွက်သုတေသနကို အသုံးပြုရသလဲ။ ဈေးကွက်သုတေသနက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ။”
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ – ဦးသုတအောင်၊ CEO၊ Hamsahub
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ – ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ၊ Marketing and Communication Director ၊ Ooredoo Myanmar
– ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်း၊ Managing Director ၊ Mango Marketing Service
– Ms. Marita Schimpl, Managing Director (MSR)
– ဒေါက်တာအောင်သူရ၊ CEO ၊ Thura Swiss
မြန်မာဈေးကွက်သုတေသနအသင်း- ရန်ကုန် (MRA) ၏ ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားတွင် “ဘာကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေက ဈေးကွက်သုတေသနကို အသုံးပြုရသလဲ။ ဈေးကွက်သုတေသနက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ။” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ Ooredoo မြန်မာမှ ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေနှင့် Mango Marketing မှ ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်းတို့က ဈေးကွက်သုတေသန ၀န်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူများ၏ ရှုထောင့်မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Thura Swiss ၏ စီအီးအို ဒေါက်တာအောင်သူရနှင့် MSR ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Ms. Marita Schimpl တို့က ဈေးကွက်သုတေသန၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ရှုထောင့်မှဆွေးနွေးခဲ့ကာ Hamsahub ၏ စီအီးအို ဦးသုတအောင်က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးသုတအောင်- ဆွေးနွေးပွဲ၏ပထမဦးဆုံးအပိုင်းကို ဈေးကွက်သုတေသန၀န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ရာတွင် မည်သည့်တိုးတက်မှုများလိုအပ်သလဲ၊ မည်သည့်ဆောင်ရွက်မှုရှိနေသလဲဟူသော မေးခွန်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်း- သုတေသနအေဂျင်စီများနှင့် သူမတို့ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့မှုများနှင့်ပက်သက်၍ အကျဉ်းချုံးပြောကြားခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများဘက်မှ စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ သူမက သုတေသနအေဂျင်စီများနှင့် အတူ ဖောက်သည်အဖြစ်ရော၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ပါ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ မြင့်မားသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု အဖြစ် ယူဆနိုင်တယ်လို့ သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ တိုးတက်ဖို့လိုနေသေးသော ကဏ္ဍနှင့်ပက်သက်၍လည်း သတင်းအချက်အလက်များရယူရာတွင် အချိန်ပေးရခြင်းရှိကြောင်း သူမက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ဖို့လိုသလို ပိုမိုလျင်မြန်စွာရယူပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်း အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ- သူမ၏ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုလိုက်မှီနိုင်ရန်အတွက် ဥပမာအားဖြင့် ဈေးကွက်ဝေစု၊ ဈေးကွက်ပြိုင်ဘက်၏ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်၏ အခြေအနေတို့ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း သူမ၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သုံးလတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရယူနေပြီး ထိုအစီရင်ခံစာကိုအခြေခံ၍ နောက်သုံးလပတ်ကာလအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနအေဂျင်စီများနှင့်အတူ တက်ကြွစွာလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေခြင်း ကြောင့်လည်း နေ့တဓူဝအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုများမှာ အရေးပါကြောင်းနှင့် သူမတို့အနေဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများ နှင့် ၄င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် သတိရှိနေရမယ်လို့လည်း အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဦးသုတအောင် – မည်သည့်အရာများ မှားယွင်းလွဲချော်သွားခဲ့သလဲ။
Ms. Marita Schimpl – စိန်ခေါ်မှုများကိုအမြဲလုပ်ဆောင်နေဖို့ အရေးကြီးကြောင်းနှင့် အကျိုးရလာဒ်များ မည်သို့ဖြစ်နေရမည်ကို ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် အချက်အလက်များ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအရာများကို ဖောက်သည်များနှင့် တစ်လျှောက် လုံး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီများသည် နိုးကြားတက်ကြွသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် စိန်ခေါ်သူဖြစ်နေရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် မည်သည့်အရာများ က လုပ်ကိုင်ဖို့ခက်ခဲနေသည်ကိုလည်း ဖောက်သည်များအား ပြောဆိုသင့်တယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၄င်းတို့၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပဲ အမြဲတွေးနေကာ တစ်ကယ်တမ်းဖောက်သည်များအပြည့်အ၀မရရှိသည့် အလုပ်အပ်သူမျိုးကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ထိုသူများဟာ ၄င်းတို့ရဲ့အတွေးအမြင်ထဲမှာသာပိတ်မိနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူမကပြောခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအခြေအနေမျိုးတွင် ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီများက ဖောက်သည်များအား သစ်လွင်သောအမြင်များကို ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းရှိရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်သူရ – မတူကွဲပြားသော အလုပ်အပ်သူများတွင် မတူညီသောအလေ့အထများရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အချို့သော အလုပ်အပ်သူများအနေဖြင့် သူတို့လိုအပ်သောအရာကို တိတိကျကျ သိရှိထားပြီး မည်သည့်ရလာဒ်များ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သလဲဆိုတာကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိထားတယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အချို့အလုပ်အပ်သူများဟာ ရည်ရွယ်ချက်ကို တိတိကျကျမသိဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အပ်သူတို့အနေဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသော ဈေးကွက် နှင့် မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းချချင်သလဲဆိုတာကို သိရှိထားသော်လည်း သူတို့မှာ အနည်းငယ် အရှုံးပေါ်နေပြီး ယင်းအခြေအနေတွင် ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီများက လမ်းညွှန်ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သူက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများလည်းရှိနိုင်ပြီး အခြားပြသနာမှာ အချို့အလုပ်အပ် သော ကုမ္ပဏီများက အချက်အလက်များရယူလိုသောကြောင့် ဈေးကွက်သုတေသန၀န်ဆောင်မှုမှာ အရေးပါသည်ကို နားလည်ထားသော်လည်း အခြားအကြောင်းအရာများပေါ်တွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်နေကြောင်း သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို အချို့အလုပ်အပ်သူများသည် ယင်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကို တိတိကျကျမပြောနိုင်ဘဲ အေဂျင်စီသို့ရောက်ရှိလာပြီး သုတေသနအဆိုပြုချက်တစ်စောင် ရေးခိုင်းလေ့ရှိ ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ထိုသူများမှာ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်မျှအားထည့်ရသည်ကို နားလည်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပြုချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးချိန်တွင် ယင်းအရာမှာ ၄င်းတို့လိုအပ်သောအရာ တိတိကျကျမဟုတ်ကြောင်း ပြောလေ့ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်အပ်သူများအနေဖြင့် လည်း ၄င်းတို့လိုချင်သော နည်းလမ်းနှင့်အချက်အလက်များကို တိတိကျကျ ညွန်ကြားပေးဖို့လိုအပ်ပြီး ယင်းမှသာ သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် ၄င်းတို့အား လမ်းညွန်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားမှုထားခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးမှ မည်သို့ မျှော်မှန်းထားသလဲဆိုတာကို နားလည်မှုရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုခဲ့ပြီး မည်သည့်အရာမှ ပုံသေဖြစ်နိုင်ချေမရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်အပ်သူများနှင့် သုတေသနအေဂျင်စီများ အနေဖြင့် အတူတကွလက်တွဲပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – ဈေးကွက်သုတေသနဆိုသည်မှာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိုသာ ပံ့ပိုးပေးရမည်မဟုတ်ပဲ ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် အလုပ်အပ်သူများအား အခွင့်အလမ်း များကို လမ်းဖွင့်ပေးရာတွင် ကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနအေဂျင်စီများအနေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်များဟာ အလုပ်အပ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် မည်သို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကို အကြံပေး သင့်ကြောင်းနဲ့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်း မည်သို့ကွဲပြားစွာဆောင်ရွက်နိုင်သလဲဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးရမှာဖြစ်တယ် လို့ သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သုတေသန၀န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေနဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင် တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ သူမကယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့နဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်း မည်သို့တန်ဖိုးဖြည့်စွက်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ သူမကပြောခဲ့ ပါတယ်။ သူမအတွက်တော့ အလုပ်အပ်သူများကိုလိုက်နာပြီး ပိုမိုအောင်မြင်ဖို့အကူအညီပေးခြင်းဟာ သူမတို့ အမြဲလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ပါက လူအများအနေဖြင့် ဈေးကွက်သုတေသန၀န်ဆောင်မှုဟာ ဈေးနှုန်းမြင့်မားတယ်လို့ ထင်မြင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်း – သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စွမ်းရှိမရှိနှင့် ပက်သက်၍ သုတေသနအေဂျင်စီများ၏ ထောက်ခံအကြံပြုချက်အပေါ် မည်မျှယုံကြည်အားထားနိုင်မလဲ။
Ms. Marita Schimpl – စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည့်အရာများ အများအပြားရှိကြောင်းနှင့် မသေချာမရေရာမှုများ အမြဲရှိနေတတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရလာဒ်အတိအကျကို သူမတို့အနေဖြင့် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသော် လည်း စားသုံးသူများနှင့်ပက်သက်ပြီး သူမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့ ဗဟုသုတတို့ကိုအခြေခံကာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနဲ့ မှားယွင်းနိုင်ခြေတို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလုပ်အပ်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များအတွက် အတွေးအမြင်အသစ်များကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ – အချက်အလက်များနှင့်ပက်သက်၍ တိကျမှုနှင့် ဆက်စပ်ပက်သက်မှုတို့အပေါ် ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမက အချို့အချက်အလက်များသည် သူမတို့ထံသို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင် လုံးဝ အကူအညီမဖြစ်တော့သည့် အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဒေသအများအပြားတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးချနိုင်စွမ်းက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့် သူမအနေဖြင့် ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ၏ တင်ပြချက်ကိုသဘောတူလက်ခံကာ သူမတို့အနေဖြင့် ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်ကဲ့သို့ သွက်သွက်လက်လက်နှင့် လျင်လျင်မြန်မြန် လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတွေးတောဖို့လိုအပ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဦးသုတအောင် – မြန်မာနိုင်ငံသည် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုစိမ့်ဝင်မှုနှုန်းမှာ အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပြီး သုတေသနပညာရှင်များအနေဖြင့် စားသုံးသူများထံသို့ ရောက်ရှိအောင် Survey Monkey သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆန်းစစ်ကောက်ခံသော နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနည်းပညာသည် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်နှင့် ESOMER နှင့် MRA တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သောအရာဖြစ် သလားဟု သူက မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ချင်ရင်တောင်မှ စားသုံးသူတို့ ဘက်မှ အဆင်သင့်မဖြစ်လျှင် ယင်းအချက်အလက်တို့ကို အလုပ်အပ်သူများထံ ရောင်းချဖို့မကောင်းကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အပ်သူများသည် ပိုက်ဆံအမြောက်အမြားသုံးစွဲထားရပြီး သုတေသနအေဂျင်စီများထံမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလာဒ်များပြန်ထွက်လာဖို့ သူတို့ကမျှော်မှန်းထားကာ ယင်းကအဓိပ္ပါယ်ရှိကြောင်းလည်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်သည် အနည်းငယ်ခဲရာခဲဆစ်နိုင်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်အပ်သူများက အလုံးစုံပါဝင်သောရလာဒ်မျိုး သို့မဟုတ် ကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများကို အဓိကအာရုံ စိုက်ချင်သောရလာဒ်မျိုးကို လိုချင်ပါက သူမအနေဖြင့် မေးခွန်းများမေးမြန်းရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးပြုမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမှာ စားသုံးသူများအနေဖြင့် မေးခွန်း၏အဓိပ္ပါယ်များကို တကယ်နားလည်ရဲ့လားဆိုတာ အေဂျင်စီအနေဖြင့် မသိရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမအနေနှင့်လည်း ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများတွင် အချိန်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ယင်းကုမ္ပဏီများသည် ပရိုမိုးရှင်းအသစ်များနှင့်ပက်သက်၍ စားသုံးသူများကို စာပို့လေ့ရှိကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုပို့လိုက်သောစာများနှင့် မက်ဆေ့များကို လူမည်မျှဖွင့်ဖတ်သလဲ ဆိုတာကို တွေးရမှာဖြစ်ပြီး လူအများအနေဖြင့် ထိုစာများကိုဖွင့်ဖတ်ဖို့အတွက် စိတ်ကုန်လေ့ရှိကြောင်း သူမက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ဖတ်သည့်လူများရှိလျှင်တောင်မှ နောက်ထပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ ဆက်သွားရန် လမ်းညွှန် လျှင် ချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးချနိုင်စွမ်းကို မြင့်တက်လာဖို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ယင်းနည်းပညာ ဗဟုသုတအဆင့်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားသည်မှာ သေချာသွားမှ အေဂျင်စီများအနေဖြင့် ယင်းသုတေသနနည်းပညာတို့ကို စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်သူရ – အချက်အလက်များသိုမှီးမှုဟာ အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်သွားသော လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ပိုမိုရောက်ရှိသင့်သော်လည်း ရေရှည်တွင် ယင်းကိစ္စသည် ရှင်းချက်ထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းနှင့် ပိုမိုခက်ခဲလာလိမ့်မယ်ဟု ပြောခဲ့ပါတယ်။ အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်သွားသော အချက်အလက်များသိုမှီးမှုနှင့် လုပ်ငန်းများမှတဆင့် အချက်အလက်သိုမှီးမှုတို့ကို မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ယင်းအချက်အလက်များ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရမလဲဆိုတာက နောက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနအေဂျင်စီများအနေနဲ့ အချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းအပေါ် ပိုမိုအားစိုက်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနအေဂျင်စီများအနေနဲ့ အနာဂတ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာနဲ့ ပက်သက်လို့ကတော့ ယခုအချိန်မှာ သူ့ရဲ့အဆင့်ဆင့်ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး သုတေသနလုပ်ရမယ်။ ဒါကိုအဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူရမယ်။ ဖောက်သည်များက ဒါကို နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဒါတွေက အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်သွားရပါမယ်။ ဒါဟာရှည်လျားတဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီး ဒီလည်ပတ်မှုဟာ ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်၊ သို့မဟုတ် ၂နှစ်အထိ ကြာနိုင်ပြီး ဒါကိုပြောင်းလဲမှုလို့ ယူဆပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ ဒါဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဆင့်တစ်ခုမှာ အချက်အလက်သိုမှီးခြင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ ရလာတဲ့အချက်အလက်တွေကတဆင့် ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများကို တိုက်ရိုက်ပုံဖော်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်တိုတောင်းတဲ့ ၀ယ်သူစိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဒါမှမဟုတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူက ဒါဟာ ပုံမှန်ဈေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ မျှော်မှန်းပြီး ဆန်းစစ်သွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါဟာ စာရင်းကောက်ယူမယ်၊ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ မယ်၊ ပြီးရင်အစီရင်ခံစာရေးမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါဟာ တစ်ဦးချင်းစီကကောက်ခံရရှိလာတဲ့ အချက် အလက်တွေကို လုပ်ဆောင်မယ့်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါဟာပိုမိုတိုတောင်းတဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – အွန်လိုင်းမှတဆင့်စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ကြာသင့်သောအချိန်ကာလနှင့် ပက်သက်၍ ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ထက် ပိုမကြာသင့်ကြောင်း ဥပမာအားဖြင့် အချို့အွန်လိုင်းမှစာရင်းကောက်ခံမှုများမှာ မိနစ် ၃၀ အထိကြာမြင့်တတ်သောကြောင့် ယင်းအခြေအနေမျိုးတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့လိုပါက အလုပ်အပ်သူများထံမှ အကူအညီများလိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေးအဖြေကဏ္ဍအတွက် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးသုတအောင်က မေးခွန်းများကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ဒုတိယပိုင်းအား မေးခွန်းများကိုအခြေခံပြီး အတွေးအမြင်များကို မျှဝေခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
မေးခွန်း ၁။ ။ MRA ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးမိုးကျော်က အချက်အလက်များစုယူကောက်ခံခြင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး “ Facebook နဲ့ Google တို့က သုတေသနမလုပ်ပါဘူး။ သူတို့အားလုံးမှာ အချက်အလက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် Facebook နဲ့ Google တို့က သုတေသနမလုပ်ကြတာလဲ။ သူတို့မှာ သူတို့လိုအပ်တာတွေအားလုံး ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလား” ဟု စတင်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ – Facebook အနေဖြင့် အချက်အလက်များကို သူမတို့အား မျှဝေပေးသော် လည်း အခြားပြိုင်ဘက်များအတွက် အသေးစိတ်ကျသော အချက်အလက်များမဟုတ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါ တယ်။ ပြီးခဲ့သောလကအခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ယခုလအတွက် အကြံပြုများကိုသာ မျှဝေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ Facebook အနေဖြင့် အနီးစပ်ဆုံးသော ရာခှိုင်နှုန်းအချက်အလက်များကို မျှဝေပေးသော် လည်း သူမတို့အဓိကယှဉ်ပြိုင်နေရသော ဈေးကွက်ပြိုင်ဘက်ကိုမသိရှိကြောင်း၊ သူမတို့၏အသုံးစရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သည့်အေဂျင်စီက သူမတို့ကိုအပြိုင်လိုက်နေသလဲ၊ ရှေ့မှဦးဆောင်နေသလဲဆိုတာကိုသာ ခန့်မှန်းပေးကြောင်း ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေက ဖြေခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ၄င်းတို့အနေဖြင့် ယခုလိုပုံစံမျိုးသာ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သေးပြီး ယခင်ကဆိုလျှင် Facebook နှင့် Google တို့သည် ၄င်းတို့အကြောင်းအချက် အလက်များကိုပင် မျှဝေခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း၊ မကြာသေးခင်ကမှ Facebook အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏အလုပ်အပ်သူ များအပေါ် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအား မြှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် Ooredoo အနေဖြင့် ၄င်းတို့အား မေးခွန်း များမေးနိုင်ပြီး သုံးလပတ်စာအချက်အလက်များအတွက် Facebook က မျှဝေပေးကာ Google မှာလည်း ယင်းပုံစံအတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြောင်း၊ အခြားအချက်အလက်များမှာ စားသုံးသူများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း သူမက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – Facebook အနေဖြင့် သုတေသနပြုလုပ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်းနှင့် သူမတို့အနေ ဖြင့် နည်းပညာအသစ်များကို သေသေချာချာလေ့လာသင့်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သုတေသနပညာရှင်များအနေဖြင့် အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောအရာများအား အကာအကွယ်မပေးသင့်တော့ပဲ ပြောင်းလဲမှုအသစ်များအားလုံးကိုလက်ခံကာ ထိုးထွင်အမြင်အကြံပေးများ အဖြစ် နေရာယူသင့်ကြောင်းနှင့် တစ်နည်းဆိုရလျှင် ၄င်းတို့ကိုအလုပ်အပ်သူများအား စားသုံးသူများကို အမှန်တကယ်နားလည်လာအောင် အကြံပေးသည့်နည်းလမ်းကို လုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်သူရ – ကုမ္ပဏီအသေးများနှင့်အကြီးများသာမက သြဇာကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးများ အတွက်ပါ အချက်အလက်များအား အကာအကွယ်ပေးထားခြင်းသည် အရေးကြီးကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ယင်းအဆိုကို Ms. Marita Schimpl က ထောက်ခံခဲ့ပြီး စားသုံးသူများ၏အတွင်းရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်း – ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်၊ အတွင်းရေး (Privacy) နှင့်ပတ်သက်၍ သူမ၏စိုးရိမ်မှုကို ပြောကြားခဲ့ပြီး လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သူမတို့အားစောင့်ကြည့်နေပြီး သူမတို့နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ရယူနေသည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယင်းလူမှုမီဒီယာ အက်ပလီကေးရှင်းများကို ၀င်ရောက်အသုံးပြုပြီး အပျော်သက်သက် မေးခွန်းများဖြေကြားခြင်းနှင့် အဖြေရလာဒ် များတို့ကိုကြည့်ခြင်းကိုပင် ၀န်လေးနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။
မေးခွန်း ၂။ ။ MRA ဥက္ကဦးမိုးကျော်က “ဈေးကွက်သုတေသနအတွက် အသုံးပြုဖို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရန်ပုံငွေကို မည်မျှသတ်မှတ်ထားပါသလဲ။ Facebook က အခြေခံအားဖြင့် အချက်အလက်များသိုမှီးထားပြီး ဥပမာအားဖြင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြော်ငြာကို ဘယ်သူတွေမြင်သွားလဲ၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်ကြည့်သွားလဲနဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် တွေကို ဘယ်သူက၀ယ်ပြီး ဘယ်သူက မ၀ယ်ဘူးလဲဆိုတာတွေကို သိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖောက်သည် ၇၀% နဲ့ ၈၀% လောက်က Facebook ကို သုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် အချက်အလက်ပေးဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ကျနော်တို့မပေးနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံး ကိုလည်း သူတို့ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီတွေနဲ့ Facebook တို့ထဲမှာ ဘယ်သူပြောတာကိုပဲနားထောင်တော့မယ်လို့ တွေးမိခဲ့တဲ့အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ဖူးသလား” ဟု ဦးမိုးကျော်က မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ – သူမတို့အနေဖြင့် နှစ်ဖက်စလုံးမှအကြံပြုချက်များ၊ အချက်အလက်များကို နားထောင်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သူမတို့ရဲ့ တီဗီကြော်ငြာအစီစဉ်တစ်ခု မည်မျှထိရောက် သွားလဲဆိုတာကို ယခင်ကြော်ငြာ၏အောင်မြင်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ Facebook မှတဆင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး အခြား တစ်ဖက်မှာတော့ ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ၊ မကြိုက်နှစ်သက်မှုများနှင့် အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မည်သည့်အရာများ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်သွားသင့်သလဲဆိုတာကို နက်နက်နဲနဲအကြံပြုပေးနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ Facebook အနေဖြင့် ယင်းသို့မဆောင်ရွက်နိုင် ကြောင်းနှင့် အချက်အလက်အများအပြားကိုမူ Facebook မှ ရရှိနိုင်ကြောင်းလည်း သူမက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးသုတအောင်က မေးခွန်းများဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
မေးခွန်း ၃။ ။ “ အချက်အလက်များစွာ စုဆောင်းထားသည့်နေရာ (Big Data) တွေနဲ့ ဥာဏ်ရည်တုနည်းပညာ (AI) တို့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် လူတွေက ခင်ဗျားတို့ကို ၄င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုမှုသဘောဆန္ဒမရှိပဲ အချက်အလက်တွေကို ပေးနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အမြင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုမှုဆန္ဒသဘော မပါဘူးဆိုရင် သုတေသနလုပ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သဘောဆန္ဒမပါတဲ့ အချက်အလက်ကြီးတွေ၊ သုတေသနအချက်အလက်တွေကို ကျနော်တို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်မလဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး Esomar အနေနဲ့ စီမံချက်တွေ၊ မူဝါဒတွေနဲ့ ဆောင်ရွယ်နေပြီးဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မေးခွန်းအနေနဲ့ ကျနော်တို့အတွက် ထိုးထွင်း အမြင်များဖြစ်နိုင်တဲ့ သုတေသနလုပ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ သုတေသနမလုပ်ထားတဲ့ အချက်အလက် တွေကို ဘယ်လိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်နိုင်မလဲလို့ မေးမြန်းချင်ပါတယ်” ဟု Kantar TNS မှ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – ကံမကောင်းစွာနဲ့ Facebook ဒါမှမဟုတ် အခြားအက်ပလီကေးရှင်း များကို ကျမတို့ အသုံးပြုချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ရာတိုင်းတာခံရမှာဖြစ်ပြီး ကျမတို့လည်း ဆန္ဒသဘောပေးရပါလိမ့် မယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ယင်းစံနှုန်းတွေကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး ကာကွယ်ပေးရမှာက ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ အလုပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ရလာဒ်ကမည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသလဲဆိုတာနဲ့ မူလအရင်းအမြစ်က ဘာလဲဆိုတာကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ Facebook နှင့် Weibo တို့ကိုသုံးစွဲသူများသည် တီဗီကြော်ငြာများကို ကြည့်ရှုသူများနှင့် ကွဲပြားခြားနားကြောင်း သူမက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၄င်းတို့အား တစ်နေရာတည်းတွင် ထည့်မထားနိုင်ကြောင်းနှင့် ဈေးကွက်သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ရဲ့ အလုပ်အပ်သူများကို အကြောင်းအရာအများအပြားအား တစ်နေရာတည်းမှာထည့်မထားဖို့ သတိပေးနေရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သူမက အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားလုံးအနေဖြင့်စံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရမှာ ဖြစ်ပြီး မလှုပ်မယှက်ကြီးကြပ်မှုများအား မလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီအများအပြားမှာ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းနှင့် အကယ်၍သုတေသနကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက စားသုံးသူများ၏ ဆန္ဒသဘောများကို အလေးထားရမှာဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သုတေသနကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အချက်အလက်များမည်သည့်နေရာမှလာသလဲ၊ အရင်းအမြစ်ကဘာလဲဆိုတာနဲ့ နည်းပညာများက ဘာလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုနေရမှာဖြစ်ပြီး ယင်းအချက်များအားလုံးကိုအသုံးပြုကာ အချက်အလက်များ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုရှိသလား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်သူရ – လူအများအနေဖြင့် Facebook သို့မဟုတ် Google တို့ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုချိန်တွင် ၄င်းတို့ကျော်ဖတ်ပစ်လိုက်သော အရာများက ဆန္ဒသဘောနှင့်ပက်သက်၍ ဖော်ပြပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များကို သူတို့ဆန္ဒသဘောအတိုင်း ကောက်ခံနေခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့အတွက် မည်သည့်အရာက တန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတာကို ဖောက်သည်များကသာ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ သူကထင်မြင် ကြောင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ၀န်ဆောင်မှုဖန်တီးနိုင်စွမ်း စသည်ဖြင့်တို့ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် လူဦးရေတစ်ခုလုံးကိုထင်ဟပ်သော အချက်အလက်များမလိုအပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ သူတို့ပစ်မှတ်ထားလိုသော လူအုပ်စုများလိုအပ်သောအရာ တို့ကိုသာ သိလိုခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် သူတို့လုပ်ဆောင်နေသောအရာများကို ရှာဖွေစူးစမ်းဖို့ လုံလောက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ အချက်အလက်များက မည်သည့်အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်နေသလဲဆိုတာနှင့် မည်သည့် အဓိပ္ပါယ်မရှိကြောင်းတို့ကို နားလည်ထားရန်မှာ ဖောက်သည်များ အတွက်အရေးပါပြီး သုတေသနအေဂျင်စီ များအနေဖြင့် ယင်းအခြေအနေတွင် တန်ဖိုးဖြည့်စွက်ပေးခြင်း၊ အချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင် ပေးခြင်းနှင့် ရှင်းပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် အခြေအနေ အချိန်အခါအရ မှန်ကန်ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်း – သူမတို့ကဲ့သို့ ကြော်ငြာအေဂျင်စီများအနေဖြင့် Facebook ကဲ့သို့ သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီး အမှတ်ရနေနိုင်မည့်၊ ထိရောက်မည့် စီးပွားရေးကြော်ငြာများကို မည်ကဲ့သို့ ဖန်တီးဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာက စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယခင်က သူမတို့အနေဖြင့် တီဗီကြော်ငြာ တစ်ခုအတွက် သုံးလမှ၊ လေးလအထိ အချိန်ယူခဲ့ရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင် သူမတို့အနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်၌ပြသနိုင်မည့် စီးပွားရေးကြော်ငြာအတိုလေးများကို ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုမှာ ရေရှည်ခိုင်မာအောင် မည်သို့ဖန်တီးရမလဲဆိုတာနှင့် မည်သည့်တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်း ရမလဲဆိုတာတို့ဖြစ်ကြောင်း သူမက ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တန်ဖိုးကြီးမားသော စီးပွားရေး ကြော်ငြာများကို ဖန်တီးဖို့လိုအပ်သော်လည်း ယင်းကြော်ငြာမှာ ထိရောက်မှုလည်းရှိကိုရှိရမှာဖြစ်ကြောင်း သူမက အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မေးခွန်း ၄။ ။ “၁၀ နှစ်အတွင်း လူငယ်ကဏ္ဍတိုးတက်မှုရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် သုတေသနကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အနာဂတ်အတွက် မည်သို့ပြင်ဆင်သွားမလဲ။ ယခုမှစတင်ထူထောင်လိုက်တဲ့ သုတေသနအေဂျင်စီအသစ် များအနေဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ”။
မေးခွန်း ၅။ ။ “ဒီတိုးတက်မှုနှုန်းကို ဖြစ်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျနော်တို့က ဗီယက်နမ်တို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကို ပြောနေကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ ထုတ်ကုန်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ သုတေသနရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအသိပညာပေးရမယ်ဆိုတာက အခြေခံကျတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်” ဟု Kantar TNS မှ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုမေးခွန်းအား ESOMAR Asia ၏ Pacific Ambassador ဖြစ်သူ Mr. John Smurthwaite က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တွင် ၈၀% မှ ၉၀% ခန့်ရှိသော သုတေသနအသုံးပြုသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ နိုင်ငံတကာမှလာသော ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် ၄၀% မှ ၅၀% သော ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဟာ သုတေသနအတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲလာကြသဖြင့် အဓိကအရင်းအမြစ်သည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှလာခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသော ဖော်ပြချက်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ပွင့်ဦးဆွေ – သူမတို့အနေဖြင့် သုတေသနအေဂျင်စီများနှင့် တက်တက်ကြွကြွနှင့် အဆက်မပြတ် လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်း – ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများအပြားဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့က မှန်ကန်ကောင်းမွန်သော ကြော်ငြာများဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ကြော်ငြာအေဂျင်စီများထံသို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အကယ်၍အလုပ်အပ်သူအနေဖြင့် အချက်အလက်များမရှိပဲ ကြော်ငြာအေဂျင်စီများထံသို့ လာရောက်ခဲ့ပါက အလုပ်အပ်သူဘက်မှ အချက်အလက်များကိုအရင်ဆုံးဝယ်ယူရန် အေဂျင်စီဘက်မှ ပထမဦးဆုံးအကြံပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကြီးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်အပ်သူများအနေဖြင့် သုတေသန၏အရေးပါပုံနှင့် ယင်းအပေါ်ငွေကြေးအသုံးပြုရမည်ကို သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သူမက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်အဖြစ် သူမက သုတေသနအေဂျင်စီများ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းအလုပ်အပ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ၄င်းတို့အား အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အရေအတွက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသန၀န်ဆောင်မှုများကိုပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဈေးကွက်သုတေသနအသင်း (MRA) အား ထူထောင်ခြင်းသည် အလွန်ကြီးမားသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကာ Socio Economic Class (SEC) ကဲ့သို့သော စံညွှန်းများစုပေါင်းချမှတ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Ms. Marita Schimpl – သုတေသနအေဂျင်စီများအနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် ပြည်တွင်းအလုပ်အပ်သူများ နှင့်အတူ ပိုမိုလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့် သုတေသန၀န်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်ယူချင်အောင် စည်းရုံးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်သူရ – အနာဂတ်တွင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဒီထက်ပိုမိုကြော်ငြာနိုင်မည်ဟု ယူဆ ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့်ကဆိုလျှင် သူ၏ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီသေးလေးများအနေဖြင့် ကြော်ငြာဖို့ အလားအလာမရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါတွင် ကုမ္ပဏီကို Facebook မှတဆင့် ကြော်ငြာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ဖောက်သည် ၂၀၀၀၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Facebook ပေါ်၌ ကြော်ငြာခြင်းမှာ ဈေးမကြီး သောကြောင့် အဆင်ပြေချောမွေ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း စိန်ခေါ်မှုအသစ်များအတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီလားဟု သူ့အားမေးခဲ့မည်ဆိုပါက ယခုအချိန်တွင် အသင့်မဖြစ်သေးပါဟုသာ ဖြေကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ မတူကွဲပြားသော တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုများမှာနေရာယူနေပြီး ဥပမာအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှုစိမ့်ဝင်မှုနှုန်းမှာ နည်းပါးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခုအခါတွင် လူအများထံသို့ ဈေးနှုန်းသက်သာသောနည်းဖြင့် ကြော်ငြာနေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့သိဖို့ လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များကိုလည်း သိရှိနားလည်ထားပြီး သူတို့အားလုံးစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို လမ်းဖွင့်ပေး ထားသင့်ကြောင်းပြောကြားရင်း ဆွေးနွေးမှုကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဈေးကွက်သုတေသနနှင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအပေါ် အားလုံးကသဘောတူညီခဲ့ကြပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသော အချိန်ကာလလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Previous PostPrevious Opening Speech by U Myint Thaung, Minister of Planning and Finance of Yangon Region Government
Next PostNext Transforming the Data Culture in Myanmar